Tareenka 2 ayaa ku dhacay Alexandria! 36 dhintay, 123 dhaawacmay! | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAFRIKA20 MasarTareenka 2 ayaa isku dhacay Alexandria! 36 ayaa dhintay, 123 dhaawacmay!
12 / 08 / 2017 20 Masar, AFRIKA, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline
Sida laga soo xigtay wargeysyada ugu horreeya, 36 ayaa naftooda ku waayey shil tareen oo ka dhacay natiijo ka timid isku dhac laba tareen oo ku yaal magaalada Alexandria, Masar. Inta badan dhaawacyada 123.
waqti Qaahira-Alexandria tareen rakaab ah, Waqtiga maxaliga ah ee shil 14.15 in natiijada Alexandria Port Said ee gadaal dhamaadka isku dhaceen saxaafada tareenka ayaa laga badiyay nolosha qofka ay 36 ayaa, inta badan waxaa ka mid ah la ogaaday in 123 culus ku dhaawacmeen.
Wasaarada gaadiidka ee Masar ayaa ku sheegtay hadal ka soo baxay in tareenada isku dheceen ay ka dhaceen wakhti maxali ah oo ku yaal gobolka Hurghit ee 14.15.
Waxaa la ogaaday in tareenka rakaabka qaada Qaahira-Iskanderiya uu ka dhashay shil uu ku galay tareen uu ku socday dukumiinti Alexandria-Port Said.
Mas'uuliyiinta Masaarida ayaan wali sharaxaad ka bixin sababta keentay shilka, laakiin waxay soo sheegeen in guddi loo sameeyay si loo baaro sababta keentay shilka.
Markhaatiga shil tareenka iyo saxaafadda maxaliga ah ayaa sheegay in tareenku uu ku sugnaa joogsiga tareenka ee hore.
Dalka Masar, halkaas oo noloshu ku kooban tahay Niilka Niilka, waqooyiga iyo koonfurta ee dalka ayaa ku xiran xarumaha tareenada iyo dadwaynaha ayaa doorbidaya waddada tareenka halkii ay ka ahaan lahayd waddada weyn.
Sanadihii ugu dambeeyay, shilkii ugu weynaa ee ka dhacay dalka ayaa la xaqiijiyay in dadka 2002 iyo 370 ay ku dhinteen gubasho.
Taariikhdaas ka dib, daraasiin dad ah ayaa ku dhintay shilal badan oo dhacay.
Wasaaradda Gaadiidka Masar
Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro ayaa Diyaar u ah sanadka 2019